သဘာဝရွေးချယ်ခြင်း, Macroevolution နှင့် Ring ကိုမျိုးစိတ်သစ်
၏အခြေခံအကျဆုံးတိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားတွေ ဆင့်ကဲ ဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ရိုက်လေ့လာရေးပါပဲ။ Creationists တကယ်တော့ကြောင့်အကြိမ်ကြိမ်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လယ်ပြင်နှစ်ခုစလုံးလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့်အခါ, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လေ့လာတွေ့ရှိဖူးကြောင်းပြောဆိုကြသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအခြို့သောတစ်ဦးချင်းစီရှင်သန်နှင့်အနာဂတ်သားစဉ်မြေးဆက်ဖို့သူတို့ရဲ့ဗီဇအပေါ်သွားကပိုများပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောလူဦးရေအပေါ်တစ်ဦး "အင်အား" ကွိုးစားအားထုမှတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ creationists ဖတ်ပါအဘယ်သူအားမျှအရာ၏စာပေ၌ဤ၏မြောက်မြားစွာဥပမာရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့အတိတ်တွင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတှေရှိခဲ့တယျခနြိုငျကတညျးကသဘာဝရွေးချယ်ရေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအရေးကြီးပါသည်။ ဤအချက်ကိုပေးထားသောကျနော်တို့သက်ရှိသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ fit မှတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ (မှတ်ချက်: ဒါဟာကျယ်ပြန့်သည့်သဘာဝရွေးချယ်ခြင်းကိုအီဗိုလူးရှင်းအတွက်အလုပ်မှာသာလုပ်ငန်းစဉ်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလက်ခံသည်ကြားနေဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုလည်းအခန်းကဏ္ဍတစ်ဦးချင်းစီဖြစ်စဉ်ကိုခြုံငုံဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုရန်မည်မျှအဖြစ်အချို့သောသဘောထားကွဲလွဲရှိ၏သို့သော်သဘာဝရွေးချယ်ရေးတစ်ခုတည်းသောအဆိုပြုထားသည်။ ။ သပ္ပါယ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်။ )
လက်စွပ်မျိုးစိတ်သစ် & ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်
လက်စွပ်မျိုးစိတ်: အချို့ဆွေးနွေးမှုဖြင့်သမုတ်သောမျိုးစိတ်တစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားရှိပါသည်။ အချို့သိသိသာသာအရွယ်ပထဝီဒေသအနှံ့တစ်ဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းဆိုပါစို့။
နှစ်ခုကွဲပြားပေမယ့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်သည့်မျိုးစိတ်ဖြစ်စေအဆုံးမှာရှိပါတယ်, အမှတ် A နှင့်အမှတ် B. အဲဒီမျိုးစိတ်ပုံမှန်အားဖြင့်မျိုးစပ်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုအကြားကြက်သောလိုင်းတလျှောက်သက်ရှိတစ်ဦးစဉ်ဆက်လည်းမရှိဟုဆိုသည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရှိတို့သည်ပိုမိုနီးကပ်သငျသညျတခုပိုမျိုးစိတ်တူသောအချက်မှာလိုင်းပေါ်တွင်တစ်ဦးကအဆိုပါသက်ရှိထောက်ပြဖို့ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ကြ၏ကြသည်ကို၎င်း, ပိုမိုနီးကပ်စွာသင်ပိုသက်ရှိတွေဟာအမှတ် B ကိုမှာမျိုးစိတ်တူသော B ကထောက်ပြကြသည်။
အခုတော့နှစ်ခု Endpoints အတူတူပင်တည်နေရာတွင်ရှိနှင့်တစ်ဦး "လက်စွပ်" ဖွဲ့စည်းသည်ထိုကဲ့သို့သောသောဤလိုင်းကွေးမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ဒါကလက်စွပ်မျိုးစိတ်၏အခြေခံဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကတူညီတဲ့ဧရိယာတှငျနထေိုငျနှစျခု nonbreeding နှင့်ကွဲပြားမျိုးစိတ်ရှိသည်နှင့်အခြို့သောဧရိယာကျော်လက်စွပ်ပေါ်တွင် "အဝေးဆုံး" အချက်မှာ, သတ္တဝါများအကြီးအကျယ်စတင်အချက်များမှာနှစ်ခုကွဲပြားမျိုးစိတ်များ၏ hybrids တွေကိုဖြစ်ကြကြောင်းဤကဲ့သို့သောသတ္တဝါတစ်ဦးဆက်ခံထွက်လှန်းထားသည်။ ကအချင်းချင်းအပြန်အလှန်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှုတစ်ခု interspecies ခြားနားချက်ထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်သောကြီးမားနိုင်ပါတယ်ကွောငျးဖျောပွသောကွောငျ့ဤအသိသာသည်။ မျိုးစိတ်အကြားကွာခြားချက်များထို့ကြောင့်မျိုးစိတ်အတွင်းတစ်ဦးချင်းစီနှင့်လူဦးရေများအကြားခြားနားချက်များကဲ့သို့တူညီသောမျိုး (မဒီဂရီအတွက်သော်လည်း) ဖြစ်ကြသည်။
သဘာဝတရားသာတစုံတယောက်သောသူသည်အချိန်နှင့်နေရာအရပ်မှာ discrete အမျိုးအစားများသို့တက်ပိုင်းခွဲခံရဖို့ပုံရသည်။ သင်အချိန်တစ်လျှောက်လုံးတစ်ဖွဲ့လုံးကဇီဝထုကိုကြည့်ပါလျှင်, မျိုးစိတ်အကြား "အတားအဆီး" ပိုပြီးအရည်ပေါ်လာသည်။ လက်စွပ်မျိုးစိတ်ဒီအဖြစ်မှန်၏ဥပမာတစ်ခုရှိပါတယ်။ အသက်တာ၏မျိုးဗီဇယန္တရားကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုပေးထားပါကဤအလျော့ပြေမျိုးစိတ်အကြားပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက် taxonomic ကွဲပြားခြားနားမှုဖို့မျိုးစိတ်အဆင့်ကိုကျော်လွန်ပြီးကိုတိုးချဲ့စဉ်းစားရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
အခြေခံမျိုးရိုးဗီဇယန္တရားများနှင့်အတူအမျှ creationists လိမ့်မယ် ငြင်းခုန် ဆင့်ကဲမရွှေ့ရသောဖြတ်ပြီးတစ်ဦးမှော်လိုင်းရှိကွောငျး။
creationists ကွဲပြားခြားနားဆင့်ကဲဝါဒီထက် macroevolution သတ်မှတ်ကြလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ speciation လေ့လာတွေ့ရှိထားပြီးကတည်းက macroevolution အဆိုပါဆငျ့ကဲနှင့်အညီစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပြီး, ဒါပေမယ့် creationist ရန်, macroevolution မျိုးအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တောင်မှ creationists ယေဘုယျအားဖြင့်သဘာဝရွေးချယ်ရေးရာအရပျယူမထားဘူးကြောင်းငြင်းခုန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ကပဲအရပျယူနိုငျသောအပြောင်းအလဲသက်ရှိများရဲ့ကြင်နာအတွင်းအပြောင်းအလဲများကန့်သတ်ထားဖြစ်ကြောင်းပြောကြသည်။
တနည်းကား, မျိုးရိုးဗီဇကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးအဲဒါကိုအကြီးစားအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်သူတို့ဖြစ်ပေါ်မရနိုငျသောစိတ်ကူးကိုထောကျပံ့ဖို့မဆင်ခြင်တုံတရားအကြောင်းပြချက်သို့မဟုတ်သက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်ကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ မျိုးစိတ်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်သူတို့ကိုခွဲခြားအချို့ Hard-coded ကွဲပြားရှိပါကအဖြစ် Creationists ပြုမူ။
မျိုးစိတ်များ၏စိတ်ကူးလုံးဝမတရားမဟုတ်ပါဘူး: ဥပမာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မျိုးပွားမရှိခြင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ် "အတားအဆီး။ " ကံမကောင်းစွာပဲ, သက်ရှိရုံသက်သေအထောက်အထားများကမထောက်ပံ့နေသည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်သူတို့ကိုကွဲပြားစေသည်ရာအချို့မှော်လမ်း၌ဝေဖန်နေကြသည်သောစိတ်ကူး။
"မျိုး" အကြောင်းကိုငြင်းခုံလုပ်ရန်ကြိုးစားသူကို creationists တစ်တသမတ်တည်းမပေးနိုငျပါအဘယ်ကြောင့်ကြောင်းဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်, - မျိုးစိတ်အချို့ "မျိုး" နယ်နိမိတ်အဘယ်သူမျှမဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံထားပြီးတစ်ဦးလုံးဝမတရားခှဲခွားလိုင်းဖန်တီးရန်ဖြစ်ပါသည် ကျော်လွန်. မပြောင်းနိုင်သောပြောa"ကိုမျိုး" ဖြစ်ပါတယ်အရာကိုအသုံးဝင်သောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်။ ချက်ချင်းနယ်နိမိတ် "အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော" ဒီကွဲပြားခြားနားမှုကိုချက်ချင်းနယ်နိမိတ် "အထက်က" ခြားနားချက်များကဲ့သို့တူညီသောဖြစ်လိမ့်မည်။ မည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောလိုင်းဆွဲအဘို့အဘယ်သူမျှမဆင်ခြင်တုံတရားမျှတမှုရှိနေသည်။
သိရန်အရေးကြီးအရာဆင့်ကဲမြင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိဖြစ်ရပ်မှာသဘာဝရွေးချယ်ရေး၏စိတ်ကူးကိုထောက်ပံ့သောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ speciation ဖြစ်ရပ်များတစ်ဆက်ခံနောက်ဆုံးမှာစသည်တို့ကိုဆင်းသက်လာသက်ရှိကွဲပြားခြားနားသော Genera, မိသားစုများအတွက်ခွဲခြားမည်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာမတူကွဲပြား, အမိန့်, ဦးတည်သွားစေလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်တားဆီးဖို့တစ်ခုခု၏မရှိခြင်းအတွက်ကြောင့်ကောက်ချက်ချယုတ္တိနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်
ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း မှစ. ပယ်ကြဉ် Get လုပ်နည်း - ကက်သလစ် Excommunication
ဝေလငါးထွင်ထားတဲ: Vestigial ဂါဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်းပြောပါအဘယျသို့
Non-ဘာသာရေးယုံကွညျစနစ်များ vs. ဘာသာရေး
ခရစ္စမတ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့နောက်ထပ်လိုအပ် '' ထားလိုက်ပါ Humbug '' ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံ
အဓမ္မ Intellectual တန်ဖိုးများ
စာဖတ်ခြင်း: သတ်မှတ်ခြင်း Worth အဆိုပါ # 1 နွေရာသီတာဝန်
တက္ကသိုလ် Tulsa ၏အဆင့်လက်ခံရေး
ပြင်သစ် Expression "J'en အာဣမြို့ Ras le Bol" ကိုသုံးပါဖို့ကိုဘယ်လို
အမြတ် calculate ကိုဘယ်လိုထွက်ရှာမည်
ထိပ်တန်း 10 ဦးမင်္ဂလာဆောင် toasted
အဲဖရက် Hitchcock နှင့် cari Grant ကဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
အမိုးနီးယား-အခြေပြု Glass ကိုသင့်ရဲ့ကားရှေ့မှနျအတှကျ Cleaner မကောင်းပါလား?
ရှောင်ကြဉ်ရန်ဘောလီဘော Toss အမှား
အမေရိကန်နှင့် Complex ဆက်ဆံရေးကျူးဘားရှိသည်သမိုင်း
ဂေါက်ကွင်းအတွင်း Par-3 Hole ရှင်းပြ
NCAA ရတိုင်းငါ II ကိုသို့မဟုတ် III ကိုအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုပါသလား
အဆိုပါမက္ကဆီကန်စစ်ပွဲနှင့် Manifest Destiny
Sea Lion vs. ဖျံ: အ Difference ကဘာလဲ
အဲဒီဟယ်လို Play အတူပရိတ်သတ်တွှေ